XAALADA KALA GUURKA | Anti-Tribalism
← Xiisadaha U Dhaxeeya Dowlada KMG ah & Somaliland Oo Gaaray Heer Kala Guur Ah.
Prof Axmed Ismaaciil Samatar oo ka digay Dastuurka Cusub iyo isaga oo baaq u diray Dowladda soomaaliya →
XAALADA KALA GUURKA
XAALADA KALA GUURKA Q:1aad
Friday 20 April 2012 – Waxaa maalmahan loo wada xusul duubayaa ama xawli loogu jiraa, sidii loo soo xuli lahaa gudiyada marxaladda kala guurka ah, si ay u qabtaan hawlo badan oo aad u adag, labo ayaase ugu muhimsan gudiyadan, kalana ah: Ansixinta Dastuurka qabyo qoraalka ah iyo soo Xulidda Xildhibaanada.
–Dawlado ku meel gaar ah: Labaatanka sano ee burburka lagu jiro, dalka waxaa soo maray ku dhawaad shan dawlado ku meel gaar, dhaqan ahaan iyo maskax ahaanba, ku meel gaarka, waxay ahayd inay ka dambayso marlaxad nagi iyodeganaansho, haddii markii hore loo baahnaa in heerka la joogo laga gudbo, loona baxshay ku meel gaar, si loo caddeeyo inaysan ahayn daa’in iyo wax waligeed sii soconaya, balse, ayaandarrada Soomaalida ku habsatay ayey ka mid tehee, waaba la daa’imiyey.
–Shirar dib u heshiineed: Sida tan hore mugdiga dad badan uga jiro, tan waxaan filaa inay tahay bannaanyaal iyo wax iska cad. Shirarka la qabtay iyo sanadaha burburka lagu jiro marka aad is garabdhigto, waxaad ogaan inaysan kala badnayn oo iska daba dhaw yihiin, kana dhigan qiyaastii in sadaxdii sanaba mar shir la qabanayey, heer ay noqdeen shirirkani qubanayaal madashoodaaan la faaruqin, loona madlan yahay dhawr gu’ ka dibba.
–Ergay cusub: Lixdii sanee u dambaysay, waxaa la soo magacaabay sadax ergay, oo uu ugu dambeyo mudane Mahiga, haddaad gadaal sii qooraansatana qoorta ayaa ku daalaysa kaliya, waxaaba laga yaabaa inaad tirin weyso, dabcan, ujeed la’aan ma ahan, dhammaan qodobadan aan soo xusay, mid walba waxaa laga leeyahay dan gaar ah, aan isku dayno inaan fahamno. Kan hore, ee “ku meel gaarka” waa waligaagarab rarato iyo geeddi ha ka gudbin. Kan labaad, ee “Shirarka dib u heshiineed” waa waligaa gabraarta shisheeyaha ha ka guurin. Kan ugu dambeeya, ee “Ergay cusub, waa waligaa basaas ha noo kaa dhex joogo.
Ugu horrayn, tirada guddigan iyadoo lagu wareersan yahay, ayaa waxaa noo koobay Wasiirka Dastuurkaiyo Dib u Heshiisiinta C/raxmaan Xoosh sheegayna in ay horay u ahaayeen soddon qof , haddana ay yihiin sagaal qof  oo uu ku tilmaamay “khubaro” –Sir iyo caad ogayaal– waa siduu hadalka u dhigee, sagaalka sargaal wuxuu ka xusay mudanayaashan -oo dabcan uu wada ammaanay-: Caasha Kiin Faarax Ducaale, Prof jawaari, Dr Cali Siciid Faqi, Shukri Diini iyo Xannaan.
XAALADA KALA GUURKA Q:2aad
Haddaan qaybtii hore oo qormada uga hadlay; Arar, Marxaladda kala guurka ah, Guddiga Dastuurka, iyo qayb ka mid ah Dastuurka qabyo qoraalka ah, ayaan qaybtanna ku sii qaadaa dhigayaa, wali qaybo ka mid ah Dastuurka, Dastuurro is diiddan iyo Dastuur duran. Haddaba qaybtii labaad ee qormada waa tane, ka bogasho wacan.